Wararkii Ugu Dambeeyay xaalada Balad Xaawo | Wardoon
Home Somali News Wararkii Ugu Dambeeyay xaalada Balad Xaawo
Wararkii Ugu Dambeeyay xaalada Balad Xaawo
Wararka ka imaanaya degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in saakay xaalada tahay mid degan, waxaana degmadaasi si buuxda gacanta ugu haya ciidanka dowlada federaalka Soomaaliya.
Qaar kamid ah shacabkii shalay ka barakacay degmadaasi ayaa saakay dib ugu soo laabtay guryahooda si ay xaalada u qiimeeyaan, waxaana wali xiran inta badan xarumaha ganacsi iyo goobaha waxbarasho ee degmadaasi.
Ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa lagu arkayaa gudaha Balad Xaawo iyo duleedkeeda, waxa ayna ciidamada u muuqdaan kuwa ka feejigan weerar mar kale uga yimaada ciidamada Jubbaland ee shalay lagu jabiyay dagaalkii dhacay.
Sida aan wararka ku heleyno ciidamada Jubbaland ee shalay dagaalka la galay ciidanka dowlada ayaa la sheegay in ay u firxadeen xadka Kenya gaar ahaan magaalada Mandheera oo la sheegay in mar kale iska soo abaabulayaan.
Isbitaalka magaalada Mandheera ayaa lagu daweenayaa dhaawacyada qaar kamid ah ciidamada Jubbaland ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay ka dhacay xadka Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan.
Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ee hogaaminayay ciidanka Daraawiishta ayaan wali la ogeyn halka uu jaan iyo cirib dhigay, waxaana wararka qaar sheegayaan in uu ku sugan magaalada Mandheera.
Dagaalkii shalay ka dhacay Duleedka Balad Xaawo ayaa waxaa ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray labada ciidan ee dagaalamay iyo waliba dad shacab ah.
Dowlada federaalka Soomaaliya ayaan wali si rasmi ah uga hadlin dagaalkii shalay ka dhacay Balad Xaawo iyo khasaaraha ka dhashay, waxaana dagaalka guulo ka sheegtay saraakiisha hogaamineysa ciidanka dowlada ee ku sugan Balad Xaawo.
Previous articleXildhibaan Sakariye Kenya ayaa nasoo weerartay +VIDEO
Next articleMadaxwaynaha kililka 5aad walaalkiis oo ladhaawacay
Xilliga la dhagaysanayo dacwada Badda Soomaaliya iyo kenya oo lashaaciyay
Cali Naaleeye (Cali Barkhadle) oo lagu dilay Muqdisho